October 8, 2021 - Channel Lover
“သားထိသွားပြီ” လို့ အမေကို ဖုန်းဆက်ပြီး နောက်ဆုံး နှုတ်ဆက်ခဲ့တဲ့ ထင်ရှားပြည့်လျှံဦး
October 8, 2021 by Channel Lover
အဲဒီနေ့က သားဆီကနေ ဖုန်းလာတယ်။ မေမေ သားကိုထိသွားပြီလို့ ဇူလိုင် ၂၆ ရက် ညနေပိုင်းမှာ သူက လှမ်းပြောတော့ ကျမက ပြေးလေ သားရဲ့၊ ကိုယ့်ရဲဘော်တွေဆီကို အမြန်ပြေးလို့ပြောခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်သူက သားမပြေးနိုင်တော့ဘူး မေမေလို့ ပြန်ဖြေပြီး ဖုန်းလိုင်းပြတ်သွားပါတယ်” အပေါ်ကအကြောင်းအရာကတော့ မုံရွာ ဗကသကျောင်းသား ထင်ရှားပြည့်လျှံဦးရဲ့ မိခင်က ပြောပြတာပါ။ မိခင်လုပ်တဲ့သူက သူ့သားနဲ့ပြောဖို့ ဖုန်းထပ်ခေါ်ခဲ့ပေမယ့် ဖုန်းခေါ်လို့မရတော့ပါဘူး။ သူ့သားရဲ့ ကျန်ရစ်တဲ့ ရုပ်အလောင်းကို ဇူလိုင် ၃၀ ရက်နေ့မှာ ပြန်တွေ့ခဲ့ ပြီး သူ့သားရဲ့ ရဲဘော်တွေက သင်္ဂြိုဟ်ပေးခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။ မုံရွာ PDF က ထင်ရှားပြည့်လျှံဦးနဲ့ အခြားတစ်ယောက်အပါအဝင် ရဲဘော် ၅ ဦးဟာ ဇူလိုင် ၂၆ ရက်က ဖြစ်ပွား … Read more
ရန်ကုန်တွင် စစ်အာဏာရှင် ဖြုတ်ချရေးနှင့် PDF များကို ထောက်ပံ့ရေး ညနေ သပိတ် ချီတက် သပိတ်မှောက်(ရုပ်/သံ) ရုပ်သံကို အောက်ဆုံးတွင် ဖော်ပြထားပါသည်…။ ရန်ကုန်၊ အောက်တိုဘာ ၈ ရန်ကုန်တွင် စစ်အာဏာရှင် ဖြုတ်ချရေးနှင့် PDF များကို ပြည်သူများက တတ်နိုင်သမျှ ထောက်ပံ့ရေး ညနေ သပိတ် ချီတက် သပိတ်မှောက်ကြသည်။ မြို့နယ်သပိတ်အင်အားစုများနှင့် တကသအင်အားစုတို့ပူးပေါင်း၍ အာဏာဖီဆန်နေကြသည့် CDM များနှင့် တိုက်ပွဲဝင်နေကြသည့် PDF များကို ဂုဏ်ပြုကြောင်း၊ မိဘပြည်သူများအနေဖြင့် အားမလျော့စတမ်း ထောက်ပံ့ကြရန် သပိတ်မှောက် လူငယ်များက လှုံဆော်တိုက်တွန်းကြသည်။ credit unicode ရနျကုနျတှငျ စဈအာဏာရှငျ ဖွုတျခရြေးနှငျ့ PDF မြားကို ထောကျပံ့ရေး ညနေ သပိတျ ခြီတကျ သပိတျမှောကျ(ရုပျ/သံ) … Read more
မန္တလေးတွင် ယနေ့ညဦးပိုင်းက ရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးအိမ်ဗုံးပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ခဲ့မှစပြီး စစ်ကောင်စီလက်နက်ကိုင်များက သေနတ်ဖြင့်ရမ်းသန်းပစ်ခတ်မှုများပြုလုပ်ခဲ့သဖြင့် အများ ပြည်သူစိုးရိမ်ထိတ်လန့်မှုတို့ဖြစ်ခဲ့သည်။ “ရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးအိမ်ဗုံးကွဲတာကနေစတာပါ၊ အဲဒီမှာဟိုကောင်တွေ (စစ်ကောင်စီတပ်များ) ရောက်လာပြီး ရပ်ကွက်ထဲရမ်းသန်းပစ်ကြတော့တာပဲ၊ နာက်တော့ ၆၂ လမ်းပေါ်တက်သွားပြီး အဲဒီမှာ ဆက်ပစ်တယ်၊ လမ်းသွားလမ်းလာတွေကိုတားပြီးစစ်တယ်၊ တချို့ရိုက်နှက်ခံရတာတွေရှိတယ်” ဟု သတင်းရင်းမြစ်တစ်ဦးကပြောသည်။ မဟာအောင်မြေမြို့နယ် ၆၂ လမ်း၊ ၃၈ လမ်းနှင့် ၃၉ လမ်းကြား၊ နဒီမြန်မာဆေးရုံတောင်ဘက် မဟာမြိုင်ရပ်ကွက် ဒေသခံတို့ကဘုန်းကြီးရွာဟုခေါ်ကြသည့်ရပ်ကွက်မှရပ်ကွက်အုပ် ချုပ်ရေးမှူးဦးဖိုးကျော်ဆိုသူ၏နေအိမ်ကို ယနေ့ညဦးပိုင်းက ဗုံးဖြင့်ပစ်ပေါက်ခံရပြီးနောက်မကြာမီတွင် စစ်ကောင်စီလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ရောက်လာပြီး ပစ်ခတ်မှုတို့ပြုလုပ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။ အဆိုပါပေါက်ကွဲပစ်ခတ်မှုကို မန္တလေးမြို့နေရာတော်တော်များများကကြားလိုက်ရပြီး၊ ထို့နောက်ပိုင်းတွင်လည်း မဟာအောင်မြေမြို့နယ်နှင့်ချမ်းအေးသာစံမြို့နယ်တို့တွင် ပေါက်ကွဲမှု တချို့ရှိခဲ့ကြောင်း ဒေသခံသတင်းရင်းမြစ်များကပြောသည်။ လက်ရှိတွင် ရွှေဘုန်းရှိန်ရပ်ကွက်ကို စစ်ကောင်စီလက်နက်ကိုင်များက အဝင်အထွက်ပိတ်ဆို့ထားလိုက်ပြီး ၆၂ လမ်းတလျှောက်ကိုလည်း တားဆီးစစ်ဆေးမှုများပြုလုပ်နေကြောင်း သိရသည်။ credit unicode မန်တလေးတှငျ ယနညေ့ဦးပိုငျးက … Read more
ပြည်သူနဲ့အတူရှေ့ဆုံးကရဲရဲဝင့်ပါဝင်ခဲ့ပြီး ဖမ်းဆီခံခဲ့ရပေမယ့်လည်း speak out လုပ်ပေးခြင်းမခံရရှာတဲ့ အဆိုတော်ပိုပို
ပရိသတ်တွေချစ်ခင်အားပေးရတဲ့အဆိုတော်ပိုပိုကတော့ကိုယ်ပိုင်သံစဉ်တွေကိုဖန်တီ.းပြီးဂီတနယ်ပယ်မှာနေရာတခုရရှိနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုတော်ပိုပိုကတော့ကိုယ်ပိုင်အလ်ဘမ်များစွာထွက်ရှိထားပြီးလူငယ်ပရိသတ်တွေကြားရေပန်းစားခဲ့ကြတာဘဲဖြစ်ပါတယ် အဆိုတော်ပိုပိုဟာ ၅၀၅(က)နဲ့အမှုဖွင့်အရေးယူခံထားရသူဖြစ်ပြီး ဧပြီလထဲမှာ ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခြင်းခံခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ ပိုပိုနဲ့အတူ နာမည်ကျော်အနုပညာရှင်တွေများစွာလည်း ဖမ်းဆီးခံထားရပြီး လက်ရှိအချိန်ထိပြန်လည်လွတ်မြောက်လာခြင်းမရှိသေးတာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုတော်ပိုပိုကတော့လူထူလှုပ်ရှားမှုကြီးမှာထိပ်ဆုံးပါဝင်ခဲ့ပြီး ပြည်သူနဲ့အတူရပ်တည်ပေးခဲ့တဲ့သူတစ်ယောက်ပါ။ ဒါကြောင့်မလို့လည်းဖမ်းဝရမ်းထုတ်ခံရပြီးရှောင်တိမ်းနေစဉ်ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ လက်ရှိမှာပိုပိုကအင်းစိန်ထောင်မှာရှိနေပြီးသရုပ်ဆောင်အိန္ဒြာကျော်ဇင်နဲ့တစ်ဆောင်ထဲနေရတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ အဆွေး သီချင်းတွေကို အလွမ်းဓာတ်ခံပါပါ သီဆို ပြီး ၂၀၁၂ ခုနှစ်မှာ ချစ်ဖူးခဲ့သမျှ တစ်ကိုယ်တော် အခွေနဲ့ ပရိသတ်တွေရဲ့ အသည်းကျော် တစ်ဦး ဖြစ်ခဲ့တဲ့ ပိုပိုဟာ ယနေ့ မေလ (၁၆)ရက်နေ့မှာပဲ သက် (၃၁)နှစ် ပြည့်ခဲ့ပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ ပိုပိုကတော့ ၁၆.၅.၁၉၉၀ ခုနှစ်မှာ အဖ ဦးအောင်ကျော်ဝင်း အမိ ဒေါ်အေးအေးသိန်းတို့ မှ တောင်ဥက္ကလာ မြို့နယ် မှာ မွေးဖွားခဲ့တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ၆လ သမီးထဲကနေ အဖေ၊ အမေနဲ့ အတူ … Read more
ကံဆိုးစေလို့ အိမ်မှာ မထားသင့်တဲ့အရာ (၆) မျိုး
သင့်အိမ်မှာ အကြောင်းအရာ ထွေထွေထူးထူးမရှိဘဲ ပြဿနာတွေ ဖြစ်တတ်လား။ ကြိုးစားရုန်းကန်နေတဲ့ကြားက အိမ်ရဲ့စီးပွားရေးတွေ ကျဆင်းနေလား။ အိမ်ထဲမှာ မကောင်းတဲ့ ဝိညာဉ်တွေရဲ့ အငွေ့အသက်တွေ ရှိနေတယ်လို့ ခံစားနေရလား “ဈေးသုံးလည်း မကြွယ်နဲ့၊ ရှေးထုံးလည်း မပယ်နဲ့” ဆိုသလို ရှေးအစဉ်အဆက်ကတည်းက ယနေ့တိုင် အကျုံးဝင်နေသေးတဲ့ ဓလေ့ထုံးစံတွေကို မေ့ပစ်လို့တော့ မရပါဘူး။ အခုပြောပြမှာကတော့ အိမ်ထဲမှာ မထားသင့်တဲ့ ကံဆိုးစေတဲ့ အရာတွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအရာတွေကြောင့်ချည်းပဲ ကံဆိုးနေတယ်လို့ မဆိုလိုပါဘူး။ ဒီအရာတွေကြောင့် ပိုကံဆိုးသွားနိုင်တယ်၊ ကံကောင်းခြင်းတွေကို ပိတ်စေနိုင်တယ်လို့ပဲ ဆိုလိုပါတယ်။ သတိဟူသည် လိုသည်မရှိဘူး မဟုတ်လား။ သင်ကံဆိုးနေတယ်လို့ ခံစားနေရတဲ့အခါ ဒီအရာတွေကို အိမ်ထဲမှာ၊ အခန်းထဲမှာ ထားမိလားဆိုတာ ပြန်စစ်ဆေးကြည့်သင့်ပါတယ်။ (၁) လှုပ်ကုလားထိုင် ဘယ်သူမှမရှိတဲ့ အခန်းထဲမှာ လှုပ်ကုလားထိုင်က ဘယ်သူမှလည်းမထိုင်ဘဲ … Read more
ကိုရင်လေးရုပ်ထု ဓါတ်မှန်ရိုက်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါ ထူးဆန်းတဲ့ဖြစ်ရပ် ထိုင်း မှာနာမည်ကြီးနေ … .
ကိုရင်လေးရုပ်ထု ဓါတ်မှန်ရိုက်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါ ထူးဆန်းတဲ့ဖြစ်ရပ် ထိုင်း မှာနာမည်ကြီးနေ … . ထိုင်းနိုင်ငံ မှာနာမည်ကြီးနေတဲ့ သတင်းတစ်ခုကိုရင်ရုပ်ထုကို ဓာတ်မှန် ရိုက်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါထိုင်းမှာ နာမည် တော်တော်ကြီးပြီး ယနေ့တိုင်ထိဖူးမြော်ရသူ အားလုံး စိတ်ဆင်းရဲခြင်း ကိုယ်ဆင်းရဲခြင်းလုံးဝ မရှိဘူးဆိုတဲ့ ကိုရင်လေး ရုပ်တု တစ်ခု ရှိပါတယ်။ ကိုရင်လေးရဲ့ ရုပ်တုကို ဓာတ်မှန် ရိုက်ကြည့်တဲ့ အခါမှာတော့ ရုပ်တု အတွင်းမှာ လူတစ်ယောက် ကဲ့သို့ ပုံစံတူ အရိုးစုကိုမြင်တွေ့ လိုက်ရတာကြောင့် ပိုပြီးနာမည် ကြီးလာခဲ့ပါတယ်။ မိတ်ဆွေ လဲ ယခု ကိုရင်လေးကို ဖူးမြော် လိုက်ပါဗျာ။ယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့ ဖူးမြော်လိုက်ပါ။ အများလဲ ဖူးရအောင်ရှယ်ပေး လိုက်ပါဗျာ။ ယခု ကိုရင်လေး အကြောင်းကို ဗုဒ္ဓဘာသာ တစ်ယောက် အနေနဲ့၊ဖူးမြော် ၍ ပြန်လည် … Read more
ကြက်ဥ၊ သံပုရာသီးအမှည့်၊ သကြား ဒီသုံးမျိုးကို မယုံရင် လက်တွေ့စမ်းကြည့်လိုက်ပါ ရုတ် တရက် အား အင်ကုန်ခမ်းသလိုဖြစ်နေပြီး၊ မူးဝေသလို၊ အိပ်ရေမဝသလိုဖြစ်နေရင် ဒီနည်းလေး စမ်းသုံး ကြည့်ပါ အားအင်ကုန်ခမ်းမောပန်းနွမ်းနယ်ခြင်းနှင့် မူးဝေခြင်းကိုသက်သာပျောက်ကင်းစေသည့် ကြက်ဥသံပုရာဆမ်းဆေးတစ်ခွက်”အလုပ်ပင်ပန်းလို့ဖြစ်ဖြစ်၊အားအင်ကုန်ခမ်းလို့ ဖြစ်ဖြစ်၊မူးဝေနေရင်ပဲဖြစ်ဖြစ်အလွယ်တကူ သက်သာပျောက်ကင်းစေတဲ့ဆေးနည်းတစ်လက် ကိုမျှဝေပေးပါ့မယ်။ ပါဝင်ပစ္စည်းတွေကတော့ (1) ကြက်ဥအစိမ်းတစ်လုံး၊ (2) သုံပုရာသီးအမှည့်တစ်လုံး၊ (3) သကြားဖြူဟင်းစားဇွန်းနှစ်ဇွန်းတို့ကိုဖေါက် ထည့်ရောမွှေပေးပါ။ သံပုရာအစေ့တွေကိုဖယ်ရှားပစ်ပါ။ ပါဝင်ပစ္စည်းအားလုံးကိုနှံ့နှံ့စပ်စပ်ရောမွှေ ပြီးသောက်ပေးရင်အမောအပန်းပြေပြီးအားရှိလာမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဆေးနည်းကကျွန်တော့်ဖခင်ပေးတဲ့ရိုးရာဆေး တစ်လက်ဖြစ်ပါတယ် ။ သွေးအားနည်းသူတွေနဲ့ သွေးပေါင်ကျသူတွေပိုပြီးသုံးစွဲသင့်ပါတယ် ။ အိပ်ရေးပျက်သူတွေအတွက်လည်းအားဆေးတစ်လက်ပါ။ “ကျန်းမာချမ်းသာကြပါစေ” Creditvia. sai min thant unicode ကွကျဥ၊ သံပုရာသီးအမှညျ့၊ သကွား ဒီသုံးမြိုးကို မယုံရငျ လကျတှစေ့မျးကွညျ့လိုကျပါ ရုတျ တရကျ အား အငျကုနျခမျးသလိုဖွဈနပွေီး၊ … Read more
မော်ဒယ်ရွှေပါဦးအတွက် သတင်းဆိုးကြီး လာပါပြီ!!!!
ပြည်သူများဟာ သူမကို အရမ်းရွံ့ရှာကာ သူမကို လုပ်ကြံမည်ဟု သတင်းများ ထွက်ပေါ်လာနေပီဖြစ်ပါတယ်။ ထို့ကြောင့်သူမဟာ သူအပြင်ကို မထွက်ရဲလောက်အောင်ကြော က်ရွံ့နေပီ ဖြစ်ကာ အခုလို ငိုယိုကာ တောင်းပန်လိုက်ခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ မင်္ဂလာပါ ပရိတ်သတ်ကြီးတို့ရေ ရုပ်ရှင်အစည်းအရုံးကနေ နှုတ်ထွက်သွားကြတဲ့ သူတွေကို အဘမွေးစား သမီးရွှေရူပါဦးကတော့ ပြောလိုက်ပါပြီ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားပေါင်း (၂၀)ရိုက်ဖူးသူကိုမှ ရုပ်ရှင်အစည်းအရုံးကဒ် ပေးတာဖြစ်လို့ ဇာတ်ကား(၂၀) မပြည့်ဘဲ အစည်းအရုံးဝင်ဖြစ်ပြီး နှုတ်ထွက်စာ တင်တဲ့သူတွေကို တွေ့ရ‌တော့ အံဩမိတယ်လို့ သူမရဲ့ လူမှုကွန်ယက်စာမျ က်နှာမှာ ရေးသားခဲ့ပါတယ်။ သရုပ်ဆောင်လောကထဲ ဝင်မယ့်သူမို့ ရုပ်ရှင်အစည်းအရုံးဝ င်တစ်ယောက်ဖြစ်အော င်အစည်းအရုံးဝင်က တ်သွားလျှောက်ဖူးပါတယ်။ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကား၂၀ပြည့်အော င်ရိုက်ဖူးသူကိုမှ အစည်းအရုံးဝင်ကတ်တ ရားဝင်ပေးပါတယ်ဆိုတဲ့ စည်းကမ်းချက်ကြောင့်ခုချိန်ထိ အစည်းအရုံးဝင်မ ဖြစ်နိူင်သေးပါ။ အံ့ဩတာက ဇာတ်ကား၂၀မပြည့်တဲ့သူတွေက အစည်းလအရုံး … Read more
စွပ်စွဲပြောဆို တိုက်ခိုက်ခံနေရတဲ့ ဒေါက်တာအငြိမ်း ပတ်သက်ပြီး KNDF ရဲ့ကြေညာချက်
အများပြည်သူများသိရှိစေရန်။ KNDF သည် ဒေါက်တာအငြိမ်း မှတဆင့် ‌Heal the Wrold အဖွဲ့ထံမှ ထောက်ပံ့ငွေများနှစ်ကြိမ်တိတိလက်ခံရရှိခဲ့ပါသည်။ ‌ ဒေါက်တာအငြိမ်းမှတဆင့် ‌Heal the Wrold အဖွဲ့ထံမှ ထောက်ပံ့ငွေများသည် တော်လှန်ရေးအတွက် များစွာ အထောက်အကူပြုခဲ့ပါသည်။ သို့သော် ယခုအချိန်တွင် ဒေါက်တာအငြိမ်းအား အလှူ‌ငွေများထောက်ပံ့မှုနှင့်ပတ်သက်၍ စွပ်စွဲမှုများ တိုက်ခိုက်မှုများကို ကြားသိရသည့်အတွက်များစွာစိတ်မ‌ကောင်းဖြစ်ရပါသည်။ သို့ဖြင့်ပါ၍ KNDF အနေဖြင့် ဒေါက်တာအငြိမ်းမှတဆင့် Heal the World အဖွဲ့ထံမှ အလှူငွေများကို နှစ်ကြိမ်တိတိလက်ခံရရှိသည်မှာ မှန်ကန်ကြောင်းထပ်လောင်း ကြေညာလိုပါသည်။ KNDF သည် ဒေါက်တာအငြိမ်းအား စွပ်စွဲပြောဆို တိုက်ခိုက်ခံနေရမှုများကို ရင်ဆိုင်ကျော်လွှားနိုင်ပြီး ပြည်သူ့အကျိုးကို ယခုထက်မက များစွာပိုမိုထမ်းဆောင်နိုင်ပါစေကြောင်း ဆန္ဒပြုလိုက်ပါသည်။ ဦးဆောင်ကော်မတီ (KNDF) ဆက်သွယ်ရန်။ 0976940655 credit unicode … Read more
အိုးပိုင် အိမ်ပိုင် ဘဝမျိုး နဲ့ နေလိုသူတိုင်း ပြုလုပ်သင့်တဲ့ ကုသိုလ် တစ်ခု
အိုးပိုင် အိမ်ပိုင် ဘ ဝ မျိုး နဲ့ နေ လို သူ တိုင်း ပြု လုပ် သင့် တဲ့ ကု သိုလ် တစ် ခု အိုးပိုင် အိမ်ပိုင်နေလိုသော်နေစရာအိမ်နဲ့ ပတ်သက်လို့ ခက်ခဲတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်တွေ လည်းရှိ ပါ တယ်။ ဘုန်းကြီးရဲ့ဒကာတစ်ယောက်မှာအိမ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအခက်အခဲဖြစ်နေတော့ဘုန်းကြီးကစဉ်းစားပေးတယ်။ တစ်ဖက်သားကိုနေစရာချမ်းသာပေးရမယ်သူ့မှာကလည်းသူများအိမ်ငှားနေရတာဆိုတော့ပေးစရာကမရှိဘာလုပ်ရမလဲစဉ်းစားပြီးစာကလေးတွေအတွက်အိမ်ဆောက်ခိုင်းလိုက်တယ်။ အိမ်ဆောက်တဲ့အခါနှလုံးသွင်းရမှာကအပေးနဲ့သွားရမယ်။ စာကလေးတွေမှာမိုးကလာမှာဆိုရင်နေစရာမရှိလို့မိုးတွေကစိုလို့။ တချို့စာကလေးတွေမှာသစ်ကိုင်းမှာနားနေရင်းနဲ့အအေးပတ်ပြီးပြုတ်ကျသေတာရှိသေးတယ်။အင်မတန်ဆင်းရဲရှာတယ်။ အဲဒီတော့အိမ်ကလေးတွေဆောက်ပေးရအုံးမယ်ဆိုတဲ့စေတနာအပြည့်နဲ့အမိုးလေး၊အကာလေးနဲ့ကပြင်လေးနဲ့၊ စားစရာနေရာလေးနဲ့အိမ်လေးကိုသေချာစဉ်းစားပြီးတော့ဆောက်ပါဆောက်ပြီးတော့ကျကျနနအိမ်အဖြစ်လှူပေးပါ။ အဲဒီလိုအကြိမ်ရေများစွာလှူပေးပြီးစာကလေးတွေလည်းနေဖြစ်ပြီဆိုရင်ဝမ်းသာပီတိဖြစ်ရမယ်။ အဲဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်သတ္တိကိန်းတာနဲ့တစ်ပြိုက်နက်သူ့အတွက်နေစရာပူမနေရဘဲရလာမယ်ရမှာအမှန်ပဲဆိုတာနားလည်ကြ၊ သဘောပေါက်ကြပါနှလုံးသွေးထဲမှာစိတ်ထဲမှာသတ္တိသွင်းရမှာကိုဆိုလိုတာဖြစ်တယ်။ ဒီထက်အလွန်သစ်ပင်ကြီးမျိုးတွေစိုက်ပျိုးခြင်းကျောင်းသိမ်၊ဇရပ်စသည်တို့ဆောက်လှူပြီး ပီတိဖြစ်နိုင်လျှင်ပိုပြီးအားကောင်းမယ်လို့မှတ်ကြပါ။ ကျေးဇူးရှင်ပိုင်းလော့ဆရာ‌ တော်ကြီး… မူရင်းရေးသားသူ နှင့် ဓာတ်ပုံပိုင်ရှင်များအား လေးစားစွာဖြင့် Credit ပေးပါသည်။ unicode အိုးပိုငျ အိမျပိုငျ ဘဝမြိုး နဲ့ နလေိုသူတိုငျး ပွုလုပျသငျ့တဲ့ ကုသိုလျ … Read more